Qoorqoor ayaa sheegay inaanu waxba iska bedelin qorshihii shirka Dhuusamareeb 3… – Hagaag.com
Qoorqoor ayaa sheegay inaanu waxba iska bedelin qorshihii shirka Dhuusamareeb 3…
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay inaanu waxba iska bedelin qorshihii ahaa in maanta, ay Magaalada Dhuusamareeb ku kulmaan Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, inkastoo aysan saan-saanteeda muuqan.
Madaxweynaha oo xalay Magaalada Dhuusamareeb kaga qaybgalay xaflad lagu maamuusaayay sanad guurada 14aad ee ka soo wareegatay aasaaska Galmudug ayaa sheegay in gogoshii reer Galmudug dhigeen ay weli sideedii tahay.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in wafuudda ugu horeysa ee shirka ka qaybgaleysa ay maanta soo gaari doonto Magaalada Dhuusamareeb, inta aanay u suurtagelina ay dib kaga soo biiri doonto.
“Ballankaas iyo gogoshii reer Galmudug dhigeen waa sideedii, berri oo ay ku beegan tahay 15-ka August waxaan rajeyneynaa wafuuddii ugu horeysay inay yimaadaan, aana soo dhaweyno, intii ay u suurtageli weysana ay gadaal uga imaan doonaan, aana soo dhaweyneyno.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa dhinacyada ay tahay inay ka qaybgalaan shirkaasi ku wargeliyay inay dadka reer Galmudug u diyaargaroobeen soo dhaweyntooda.
“Waxaan rabaa inaan halkaan ka iraahdo dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay, reer Galmudug diyaargaroobeen, waqtigiina ku diyaargaroobeen, lana suggayo.” Ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor.
Sida muuqataba waxaan maanta laga rajo qabin in shirka ka furmo Magaalada Dhuusamareeb, marka aad eegto Madaxda Dowladda iyo kuwa Dowlad Goboleedyada, oo aan wada gaarin magaaladaaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in shirka uu magaaladaasi ka furmi doono wixii ka dambeeya Axada berrito, oo markaasi ay wada taggi doonaan dhinacyada ay khuseyso.
Shirka Dhuusmaareeb ayaa ah mid si weyn isha loogu wadahaayo, waxaana qorshuhu yahay in looga wadahadlo arrimo muhiim u ah masiirka dalka.
Beesha Caalamka ayaa Dowladda Federaalka iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada ku cadaadineysa inay isugu taggaan Dhuusamareeb, si ay kaga wada arrinsadaan masiirka dalka, oo ay ugu horeyso nooca doorashada ee ay tahay inay dalka ka qabsoomto 2020/2021.